Qeybta 1: Hordhac u KM Player iyo VLC Player
Qeybta 2: KM Player dib
Qeybta 3: dib u eegista media player VLC
KM Player magaca asalka ah ee kaas oo ah ciyaaryahan K-Guddomiyeyaasha degmooyinka waa ciyaaryahan warbaahinta ayaa la si gaar ah loogu talagalay daaqadaha iyo taageerayay ku dhawaad ​​qaab kasta oo daaqadaha ka ciyaari kara. The qaabab taageeray leeyihiin badan oo kala duwan marka loo eego ciyaaryahanka iyo kuwa ugu badan waxa ay kala yihiin VCD, DVD , AVI , MKV , Ogg iyo OGM. Marka ay timaado in ay caanka ah ka dibna waxa xusid mudan in ciyaaryahanka uu leeyahay user xoog leh soo socda iyo sabab la mid ah websites madax banaan download ogolaan users ma aha oo kaliya in ay soo bixi ciyaaryahanka laakiin sidoo kale in ay qiimeyn si loo hubiyo in dadka isticmaala cusub awooddo akhri dib u eegista ay ka hor inta aysan soo bixi ciyaaryahanka. Qoraaga asalka ah ee ciyaaryahanka waa Yong Kang ka Huee oo la soo saaro ay Pandora TV. Marka ay timaado in luqadaha soo koraya markaas waa yaab in ay arkaan in doorashada luqada ugu waaweyn ee la sameeyo arrintan la xiriira si ay u hubiyaan in dadka isticmaala ay ka heli shaqeynta buuxda iyo sabab la mid ah C ++, Delphi iyo Net ballaaran ayaa la isticmaalaa si loo sameeyo ciyaaryahankaan mid ka mid ah ciyaartoyda warbaahinta laga cabsado ee jeer oo dhan. Ciyaaryahanka ayaa waxaa la soo saaray sannadka 2002 iyo sii daayo deggan of this software laga cabsado yimid sannaddii 2015 markii bishii Febraayo shirkadda ku dhawaaqday in ciyaaryahan KM waa haatan ilaa iyo ayaa lagu waayay wax danbi ah oo wax cayayaanka in dadka isticmaala oo horay loogu soo wajahay. Website-ka rasmiga ah waa http://www.kmplayer.com oo waxaa taageera oo dhan luqadood oo waaweyn oo dunida oo dhan.
Waa hagaag media player VLC xaqiiqo ah uma baahna barasho iyo sabab la mid ah waxaa la ogsoon yahay in dadka adduunka oo dhan in ciyaaryahankaan laga cabsado ayaa ka tagay calaamad suuqa ugu dhaqsiyaha badan ka dib markii ay sii daayo 14 sano ku soo laabtay 2001. qoran C, C ++ iyo Ujeeddo C ciyaaryahan ayaa la soo saaray iyadoo VideoLAN iyo dhufto ee la xiriira in ay taageerto yihiin IA-32, x64, ARM iyo PowerPC. Waxay leedahay user dhawaaqa saldhig adduunka oo dhan iyo sabab la mid ah waxaa sidoo kale loo arkaa mid ka mid ah xubnihii ugu dhab ah ee technology ee jeer oo dhan. Dad aad u yar ogahay in fikradda ah VLC asalkiisu ka soo jeedo ee 1996 iyo ujeedada ugu weyn ee markii hore uu ahaa in la hubiyo in videos waxaa huleeshay oo dhan laga barto jaamacadda dunida oo dhan iyada oo loo marayo satellite isku xira wixii lagu gawraco waxaan sababo la xiriira waxbarashada laakiin sida Facebook ah caan ah software kordhay muddo waqtiga iyo halkan waxaa loogu talagalay ujeeddo waxbarasho oo haatan aan la isticmaalin halkii kaliya ku dhiirigelinayaan in uu hadda isku dayaya in ay hubiyaan in mustaqbalka technology tiyaatarada IMAX waxa kale oo gundhig ciyaaryahanka gudahood ah si loo hubiyo in ugu fiican waxaa la siin doonaa macaamiisha lacag la'aan ah. Ciyaaryahanka heysta shatiga ee GNU GPL v2 + iyo GNU LGPLv2.1 + taas oo mid ka mid ah ugu sugay ka dhigaysa ciyaartoyda adduunka. Waxa ay taageertaa kasta qaab video dunida ku ool ah.
Qeybta 2: Saddex KM Player Reviews
Saddexda u eegid ugu badan ee KM u Player ayaa laga soo qaatay Softpedia, Tech Support Talert iyo dib u eegis user in la aqriyay wakhtiga intiisa badan ku Softnic ah. The URLs kala yihiin sidan soo socota:
Muuqaaladan awood ka mid ah taageero qaabka, cabsi badan, adeegga macaamiisha iyo waqtiga jawaabta cajiib ah. Marka ay timaado in ay khasaaraha of software ka dibna waa in la ogaadaa in dadka isticmaala arrinta kaliya ciyaaryahanka waxa uu leeyahay waa in aanay awoodi karo inuu qaato iyada oo loo marayo sifaatka aad u sareeya sida ay lagu sameeyey aad u adag. Ka dib waxaa shaashada ka mid ah dib u eegida waa:
User waa ka mid ah aragtida ah in nooca ugu dambeeya oo ka mid ah ciyaaryahan warbaahinta KM uusan haysan Ac3 / DTS Audio codecs kaas hubaal abuuray buuq. Naso oo dhan waa OK iyo ciyaaryahanka ayaa kaalinta sare. Waxaa sidoo kale in la xusay in dib u eegista ay la aqriyay by macaamiisha ugu wakhtiyada:
Dib ciyaaryahanka sida mid ka mid ah fursad kale oo fiican ee ciyaaryahan kasta oo ka jirta suuqa sida ay tahay oo keliya ma aha, laakiin iftiinka rakibo sidoo kale waa mid aad u fudud oo xidhmo xidhmo isugu codec ogolaan user si aad u hubiso in qof walba oo video ah ee qaab kasta oo la ciyaaraa oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Bogga internetka ee sidoo kale ku taliyey ciyaaryahan KM si ay kuwa raadinayso freebie ah oo weli ciyaaryahan awood leh in Sidee buu u shaqeeyaa, waxayna u.
Qeybta 3: VLC dib u eegista media player
Dib u eegista ayaa waxaa laga soo qaatay Tech Radar, SNAP faylasha iyo Tech Support Talert. The URL iyo dib u eegista ay la qoray si isku mid ah:
Bogga internet ku waa eegista in ciyaaryahan warbaahinta VLC ah ciyaaryahanka ugu feature awood badan oo ka buuxaan in user ah ka heli kartaa waqti kasta oo lacag la'aan ah website-ka. Waa ciyaaryahan warbaahinta kama dambaysta ah sida iyaga per iyo user markii hore laga yaabaa in ay adag tahay in la isticmaalo qaababka laakiin waqti isku mid ah ay sidoo kale waxaa ka mid ah aragtida ah in la dhererka waqtiga user wuxuu heli doona in ay ogaadaan qaababka:
Ayaa sheegay in ciyaaryahanka uu ka mid yahay ciyaartoyda oo isku dayaya in sida ugu qaababka waxay bixiyaan waa gobol ka mid ah tahay oo laga cabsado. Interface waa mid laga cabsado oo saamaxaya kuwa isticmaala si aad u hesho sida ugu fiican oo ay u isticmaali kontaroolada si fudud. Liiska ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah sida diirada A / V iyo saamaynta, qoraalka warbaahinta iyo playlist s. Link download ayaa sidoo kale la siiyey by website-ka ee arrintan la xiriira:
Talert taageero Tech
Ku baaqay VLC Media Player sida mid ka mid ah barnaamijyada software ugu adag ee jeer oo dhan user ka mid ah taas oo ku xidhan xaqiiqada ah in user waa inay ku dadaalaan si ay u horumariyaan diinta la dhererka waqtiga, waxa ay u muuqataa in website-ka waa aragtida ah in uu yahay oo kaliya dhaqanka user in soo fuulo oo la gabal ugu fiican software mustaqbalka sidii horumar ku tiirsan oo keliya waxa on:
> Resource > VLC > KMplayer vs VLC Media Player, taas oo ah mid ka fiican